कहाँ जान्छ तस्करीको सुन ? | Infomala
सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तस्करहरुले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाएर अबैध रुपमा ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी गरिरहेका छन् । अवैध रुपमा चीनसँगका विभिन्न खुल्ला नाका र त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सुन नेपाल भित्र्याउने र भारतसँगै तेस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नाकाबाट भन्सार छल्दै ल्याएका सुन पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
Previous Postएनआरएन सँघको युरोप संयोजकमा डा. विनय श्रेष्ठको उमेदवारी
Next Postएक भोट बराबर पाँच हजार रूपैयाँ